Waa maxay sababta ay Arsenal u tahay koox si fudud ku heli karta saxiixa Hakim Ziyech? Wareysi uu 2017 bixiyay oo lagu ogaaday wax walba. – Gool FM
(London) 20 Maajo 2019. Arsenal waa mid ka mid ah kooxaha aadka u doonaya Hakim Ziyech kaas oo la xaqiijiyay inuu isaga tagayo kooxdiisa Ajax xagaagan, balse kooxda ka dhisan waqooyiga London waxaa loo fahamsan yahay iney fursadda ugu badan u heysato saxiixiisa.
Agaasimaha ciyaaraha kooxda Ajax Marc Ovemars ayaa xaqiijiyay isbuucii lasoo dhaafay in xiddiga reer Morocco uu isaga tagayo xagaagan kooxda, kooxo badan oo yurub ah ayaa doonaya oo ay ugu horreeyaan Man United, Liverpool & Arsenal.
26-jirkaan heerka caalami ee waxqabadkiisa kusoo bandhigay koobka Champions League ayaa lagu heli karaa lacag dhan 25 Malyan oo Pound.
Warbixino ka imaanaya Ingiriiska ayaa qiraya in Arsenal ay fursadda ugu fiican u heysato saxiixa xiddigaan marka lala barbardhigo kooxaha kale, waxeyna ka mid tahay kooxaha uu ku riyoodo xiddigaan.
Isagoo la hadlayay TV-ga kooxdiisa Ajax isla markaana dhinac fadhiya Justin Kluivert sanadkii 2017 ayaa la weydiiyay kooxaha uu jeclaan lahaa inuu u ciyaaro mustaqbalka.
“Hagaan, waxaan dhihi lahaa laba kooxood, waana Arsenal iyo Barcelona. waa riyadeyda ugu dambeysa” ayuu yiri Hakim kaas oo sidoo kale doortay xiddiga jecel yahay inuu sidiisa oo kale noqdo waana Mesut Ozil.
“Haa, sida caadiga ah waxaa jira hal xiddig waana Ozil”
Ugu dambeyntiina wuxuu qirtay inuusan heer ahaan u dhaweyn Ozil: “Maya, xitaa uma dhawi Ozil” ayuu ku jawaabay mar la weydiiyay hadii uu farsamo ahaan iyo tayo ahaanba xiddigaas la heer yahay.
Ajax waxaa kusoo fool leh burbur weyn maadaama Frenkie de Jong uu ku biiray Barcelona, sidoo kalana Matthijs de Ligt uu kusii jeedo Camp Nou, waxaa intaas dheer in David Neres iyo Donny van de Beek ay kooxo yurub ka dhisan bartilmaameed u yahiin.
Manchester United oo heleysa fursad ay ku afduubato saxiixa Antoine Griezmann & ciyaartoyda Barcelona oo sabab u noqonaya.